Ukulungiswa nokufakwa kwamapayipi amasha kwelinye lezakhiwo ezibaluleke kakhulu zendlu yakho - indlu yokugezela, kudala izinkinga eziningi - lapho ufuna khona izinsizakalo ezingabizi kodwa eziphezulu, yiziphi izintengo zamapayipi okusebenza manje?
Kunzima kumuntu omusha ukuqonda ukuthi amanani akhiwa kanjani nokuthi kungani umehluko omkhulu kulezi zinhlinzeko ezivela kubadlali abahlukene - izindleko zenkonzo efanayo ngezinye izikhathi zihlukahluka kabili kuya kathathu. Akuzona zonke izintengo eziwuphawu lwekhwalithi yamasevisi ngokwabo. Amanani angaba phezulu, futhi ekupheleni komsebenzi uzothola ukuthi ukhokhe iningi lokukhokha hhayi ngekhwalithi elingenakufinyeleleka, kodwa ngomsebenzi wokuxhumana wenkampani enewebhusayithi enemibala.
Yeka ukuthi ungaphutha kanjani lapho ukhetha amapayipi?
Ngineluleka ukuba ulandele imithetho ethile:
Yenza imisebenzi eyinkimbinkimbi kuphela yikontrakta eqeqeshiwe. Inkosi ehilelekile ekufakweni kwamapayipi kufanele ibe nombono wenhlangano yonke yokushisa noma ukuhlinzeka ngamanzi. Ubuchwepheshe bomsebenzi bazama ukuthola kakade enkulumweni yokuqala - buza imibuzo mayelana nezinzuzo nezingozi zokusebenzisa amapayipi wamapayipi wanamuhla, engxoxweni sebenzisa imigomo ekhethekile, ngaphambi kokuwaqoqa kumawebhusayithi akhethekile kwi-Intanethi.
Cela izinombolo zocingo zamakhasimende wangaphambili anganika impendulo enhle emsebenzini womnikazi othile.
Qiniseka ukuthi uqhathanisa ukunikezwa kwezindawo ezihlukahlukene kanye nochwepheshe ukuze babe nomqondo wezinga lentengo. Ngokufaka isicelo " ukufakwa kwamapayipi angabizi" uzokwazi ukuthola inani elincane elifanele. Ukunikezela ngamasevisi we-plumbing manje kuningi, ngakho ungavumelana njalo nomnikazi olungele ukusebenza ngaphakathi kwesabelomali sakho. Uma udinga ukufaka inombolo enkulu yamapayipi, kuyoba nenzuzo enkulu kakhulu ukukhokha ngehora.
Ngaphezu kokukhetha okulungile komculi, kubalulekile nokukhetha izinsimbi ezifanele.
Ukufakwa kwemishini yamapayipi - yini okufanele icatshangelwe uma ukhetha amadivayisi?
Kubalulekile ukunaka hhayi kuphela ukuklama, kodwa futhi nezici zobuchwepheshe - amadivayisi kufanele ahambisane nokuthuthwa kwamanzi aseRussia noma izinhlelo zokuhambisa amanzi. Namuhla, kumawebhusayithi ezitolo eziningi kunezinhlelo ezikhethekile zokukhethwa kwamapayipi emiphakathini ehlukahlukene, okubalulekile ekufakweni kwayo okufanelekayo, kodwa izincomo zohlelo ngeke zithathele ingxoxo esikhundleni seplumberom professional ezokwazi ukuhlola izici eziyinhloko zobuchwepheshe endaweni.
Ngaphambi kokuthenga imishini, zama ukujwayela ukusebenza komodeli oyithandayo, ngokubuka umsebenzi walo kulezo zindawo lapho sekuvele kufakwe khona. Uma ukhetha indlu yangasese, qiniseka ukuthi unake idivayisi yokudonsa kanye nokudonsa. Lapho ukhetha ibhuku lokugqoka lithatha izidingo zalo eziyinhloko - uma likwazi ukuqina, amandla okushisa, akukho umsindo lapho uthayipha amanzi, bese ukhetha ukugeza okune-iron. Ukukhathazeka okuyinhloko kokugeza okunjalo kungukuthi kunzima kakhulu, okuzophazamisa izindleko zokufakwa kwayo. Uma ubeka umklamo nobunjwa (nxazonke, i-oval, i-angular) kuqala, kulula futhi kulula ukufaka, bese unikeza okuthandayo emabhishini asetshenziswa nge-acrylic.
Ungakhohlwa ukuthi umthwalo wemipula - ukufakwa kwamapayipi, hhayi ukuqedwa kwezindonga - isisekelo sokugezela kumele sibe sesilungele ukulungiselela umsebenzi wokufaka. Noma kunjalo, kunzima ukuzikhethela? Namanje unemibuzo? Thola amawebhusayithi wephrofayela anikeza iseluleko samahhala avela kumatters - uzosizwa ngokukhetha izinsimbi nezinto zokwakha, uncoma umkhiqizo nomkhiqizo oqinisekisiwe.
Listening - ke ... Izici nezinhlobo ekulalela